4 inoshamisika kuti maSpanish equity anogona kutisvitsa | Ehupfumi Zvemari
Chikamu chechipiri chegore chinogona kuunza kushamisika kusinganzwisisike zvine chekuita neIbex 35 securities dzinofanirwa kuita yedu portfolio yekudyara kumeso, zvirinani pakupera kwegore. Iwo maitiro kune imwe nhanho anokanganikwa nevanoongorora vemisika yemaketi uye kuti chero zvakadaro vanogona kuita zvirinani kupfuura vamwe vese kubva zvino zvichienda mberi. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti vakave nehunhu hwakaipisisa panguva yekukwira kwekupedzisira kwakaitika mumusika wemari yenyika. Mune zvimwe zviitiko, uine upside zvinogona zvinopfuura zvinonakidza izvozvi.
Iyi nzira yekudyara inogona kunakidza kuitisa nekuti hazvishamise kuti kubva ikozvino zvichienda kune zvakakomba kugadziriswa kwemutengo yezvikamu zvemakambani. Nekudzikira kwehunyanzvi chimiro uye izvo zvinogona kutungamira kune izvo mamwe masiteki emitengo anoenda kubva pakuva bullish kune bearish, zvirinani munguva pfupi nepakati nepakati. Nepo kune rimwe divi, kune dzimwe nzvimbo dzekuSpain dzakapinda muzvikamu zvekupedzisira zvekutengesa mumamiriro ekusununguka, inova imwe yeakanakisa avanogona kupfuura nawo.
Chero nzira, zvinoita zvakajeka mukana wekutora zvinzvimbo uye ita kuti mashandiro abatsire mune imwe nguva isina kureba zvakanyanya. Kusvika padanho, izvo zviri zvimwe zvinokurudzirwa zvikuru pamusika wemasheya vaongorori vane ruzivo pamisika yemari. Kunyangwe isiri chikonzero chekutora imwe nzira yekuzvidzivirira kuti udzivise njodzi dzisina basa mune zvese zviitiko. Asi zvinogara zvichitaridzika kuti vari kuzozviita zvirinani kupfuura mamwe makambani akanyorwa mumisika yenyika. Nemabasa anoitirwa nguva pfupi nepakati zvakanyanya.
1 Mapfre ichapa zvimwe zvekushamisika
2 Endesa yakamisikidzwa pa26 euros
3 Cellnex inodzokera pakurwisa
4 Amadeus, kuwedzeredza kukosha pamusika wekutengesa
Mapfre ichapa zvimwe zvekushamisika
Mapfre yakaburitsa gore rapfuura mhedzisiro yekushanda yemamiriyoni makumi manomwe nemaviri euros muna 702, 2018% kupfuura gore rapfuura. Nekudaro, pakupera kwe0,3, kambani yakafunga kusimbisa bhajeti yayo nekupa 2018 mamirioni euros kune kukanganisika kwakasarudzika kwekufarira kubva mukushanda maInishuwarenzi muUnited States, Italy neIndonesia. Izvi zvinoitwa nechinangwa chekugadzirisa kune mamiriro matsva emisika, kuchengetedza purofiti kune avo vanogovana navo uye nekuisa hwaro kuti varambe vachikura zvine pundutso. Mushure mekuverengera izvi, purofiti yegore yaive 529 mamirioni euros, 24,5% yakaderera pane yakanyoreswa mu2017.
Kudonha kwemari yemari nekuda kwemitero yakaderera, kuderera kwemari (izvo zvakakanganisa mhedzisiro yemamiriyoni gumi nemashanu emadhora), mutengo wezviitiko zvine njodzi (kunyanya madutu nemadutu echando), zvine chekuita nebhizinesi reinsurance ye17 mamirioni euros, uye kudzoreredzwa nekuda kwehyperinflation yemasevhisi muArgentina (sezvo ichifungidzirwa senyika ine hyperinflationary nekuda kwekuti ine huwandu hwekuwedzera kwemitengo inopfuura 97% mukati memakore matatu apfuura), iine kukanganisa kwakashata kwemamiriyoni gumi nemasere euros, zvakakanganisa zvakashata mhedzisiro.
Endesa yakamisikidzwa pa26 euros
Iyo kambani yemagetsi yaitaridzika kunge yakapedza nekukwira kwayo kumusoro asi yanga isiri iyi. Kwete zvakati wandei, kana zvisiri izvo pane zvakapesana zvakatora simba idzva uye zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti ichaenda kusvika padanho re26 euros pamugove. Ndokureva kuti ichine chakakwirisa kumusoro uye icho chinogona kuve chinonakidza kutora chinzvimbo kubva zvino zvichienda mberi. Izvo zvinonyanya kuitika kuti iyi nhanho mumusika wako wemari kukoshesa hakuzozadzikiswe mune ako anotevera ekutengesa zvikamu. Pachave pasina sarudzo asi mira mwedzi mishoma kusvika padanho repamusoro remutengo wayo uye rinoenderana nechikamu chepamusoro cheiyo inosimudzira chiteshi.
Chero zvazvingaitika, uye izvi zvisati zvaitika, hunyanzvi hwayo hunoratidza kuti a kururamisa mumitengo yavo Izvo zvinokuunza iwe kumusoro kutenderera makumi maviri nemaviri euros kana zvishoma zvishoma. Kufambisa kunofanirwa kushandiswa nevashambadzi kutora chinzvimbo mune kukosha nenzira ine hukasha kupfuura zvakajairwa. Chero zvazvingava, pane chinhu chimwe chakajeka chinotitaurira kuti kana chasvika makumi maviri nemaviri eiyo ichave nguva chaiyo yekuvhara zvigaro uye kunakidzwa nezvakawanda zvakawanikwa kusvika panguva iyoyo yaunoda inoita kunge iri padhuze nepadyo.
Cellnex inodzokera pakurwisa
Hapana mubvunzo kuti iyi kambani nyowani mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities inogona kuve inoshamisa kushamisika kune vadiki nepakati varimi mune anotevera mazuva. Izvi zvinokonzerwa nekuti mutengo wekambani ino unodzokera nhonga mushure mekusvika munzvimbo dzekutsigira, zvayakaramba kare. Iyo ine inonakidza kwazvo mamiriro ehurongwa akaumbwa ayo anogona kuitungamira kuti isvike kune yayo ese-enguva yakakwirira. Chimwe chinhu chisina kuverengerwa mugore rapfuura uye chevashambadziri vakaiswa mumutengo vachafara.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti ndeimwe yemafambisirwo emusika wemasheya anga aine kuita kwakanyanya mumwedzi yapfuura. Kupfuurisa kunyangwe mamwe emakwenzi epamusoro-soro pamisika yemari. Kunyangwe ichigona kutorwa pamwe nekudzikama zvishoma izvi gumbo idzva rekusimudzira izvo zvichiri kufanira kuenda. Ehezve, zvichave zvakakodzera kumirira zvishoma mukati memutengo wakanyorwa nekuti mubairo unogona kuve wakakosha kwazvo.
Amadeus, kuwedzeredza kukosha pamusika wekutengesa
Seimwe nzira yekupedzisira, pane iyo kambani yakabatana neiyo yekushanya chikamu uye iri kupa hukuru kuratidzira kwesimba muzvikamu zvekupedzisira zvekutengesa. Nechivimbo chekuti mune yako yazvino ongororo, hapana mubvunzo kuti ichatitendera chinja zvimwe zvimire kumusoro uye izvo zvinogara zvichibatsira kwazvo kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi. Iine inonakidza kwazvo revaluation mukana wevatengesi saver. Ehezve, zvichave zvakakodzera kumirira zvishoma mukati memutengo wakanyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 4 kushamisika kuti Spanish equities dzinogona kutiunzira